မိုးလုံလေလုံဆက်သွယ်ရေး Cable ကိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံအဆောက်အဦးအပြင် Optical Fiber Cable ကိုတွင်အာရုံစူးစိုက်
ဒါဟာညမှာဒါမှမဟုတ်လမ်းအပေါ်အမိန့်မှသင်တို့အဘို့ပိုပြီးအဆင်ပြေမယ့်. မင်းအလုပ်များနေတယ်. အဘယ်သူမျှမကပိုခဲအချိန်သို့မဟုတ်နောက်ကျော-အမိန့်နှင့်ပတ်သက်ပြီးနားမထောင်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေ - သငျသညျ NOW ကလိုချင်တာတွေအလွယ်တကူရရှိနိုင်မယ့်အဘယ်အရာကိုမြင်ခြင်းနှင့်အမိန့်.
ကို click & Collection
ဒီဆန်းသစ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ, ဝယ်လက်သူတို့အတွင်းဝယ်ယူထုတ်ကုန်ကောက်လို့ရပါတယ် 4-6 တောင်အာဖရိကမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသခံစုဆောင်းခြင်းမှတ်၏တဦးတည်းမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်း, သိုလှောင်မှုနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ်ဖျက်သိမ်းရေး.
i-Pay ကိုကုန်သည်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုအဖြစ်, အကြှနျုပျတို့သညျထိုပူဇော် 100% လုံခြုံပြီးအဆင်ပြေအွန်လိုင်းစျေးဝယ်. ကျနော်တို့အွန်လိုင်း EFT ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံအဖြစ်ဘဏ်လွှဲပြောင်း.
3M ကအနိမျ့ MOQ ST(UPC) ST ဖို့(UPC) တယ်လီကွန်မြူနီကေး multimode ဒျူပလက်စ CATV Optical Fiber Jumper ကိုဝါယာကြိုးလိုင်း
အမိုးခုံးစက်မှုတံဆိပျကို optical fiber ကို splice ပိတ်သိမ်း pp abs sillicon ရော်ဘာ,မိုးကုတ် 505(ဌ)xd200mm max288core, GJS20-DR05A-7ဆိပ်ကမ်းများ
ရေစိုခံနိုင်သော IP68 အမှတ်တံဆိပ် Mount Fiber Enclosure အပူပေးစက်
လုံခြုံစိတ်ချရသောအမျှင် Optic Splice Closure 120 cores
စက်မှုတံဆိပ်ခတ်ခြင်း Wall Mount Fiber Enclosure Inline အမျိုးအစား ABS PP
ပြင်ပဖိုင်ဘာမှန်ဘီလူးပိတ်ထားသော ABS PP4ဗန်း
ပိုက်လိုင်း Inline အမျိုးအစားအတွက်စက်မှုတံဆိပ်ခတ်ခြင်း Aerial Splice Enclosure
အလျားလိုက် Inline Splice ပူးတွဲ4ကေဘယ်လ်ဆိပ်ကမ်းများမက်စ် 144 FTTH အတွက်အဓိက
ခုံး5Ports Fiber Optic Joint Closure 24 ဝေဟင်တိုင်ဘို့ cores တပ်ဆင်ထားသည်
စက်မှုတံဆိပ်ခတ်ခြင်း ABS ဖြင့်တိုက်ရိုက်မြှုပ်ထားသော optical fiber splice အဖုံး
432 core IP68 Fiber Optic Splice ပူးတွဲပါဒေါင်လိုက်အမျိုးအစားစက်မှုတံဆိပ်ခတ်
9 Port Port Fiber Splice ပိတ်ခြင်း Fiber Optic Splice ဗန်းပေါ့ပေါ့
ကျွန်ုပ်တို့၏ကော်ပိုရေးရှင်း 6years ကျော်တဲ့ professional fiber optic cable ရဲ့ထုတ်လုပ်သူများနှင့် patch ကိုကြိုးဖြစ်ပါသည်
Cable ကိုထုတ်လွှင့်အဓိကအားဖြင့်အလင်း၏စုစုပေါင်းရောင်ပြန်ဟပ်မှု၏နိယာမအပေါ်အခြေခံသည်. အလင်းကိုကာလျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းဖြစ်ပါသည်. မြင်နိုင်အလင်း၏လှိုင်းအလျားအကွာအဝေး 390 ~ 760nm ဖြစ်ပါသည်. ,...
ပါကစ္စတန်ပါဝါဘူတာ Fiber optic cable ကိုအသုံးပြု
Power ကကြိုးတွေဟာတင်သောနည်းလမ်းကိုနှင့်လျှောက်လွှာအရသိရသည်မျှော်စင်-added အမျိုးအစားနှင့်ဓာတ်အားလိုင်းစုပေါငျးအမျိုးအစားသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်.
roject အမည်: လျှပ်စစ်စွမ်းအား Booster ဘူတာ Jian'an နှင့်ကောက်ခံရေးလိုင်းဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည်:
OPGW Cable ကိုသည်အသုံးချနိုင်ရန်လျှပ်စစ်စွမ်းအားဖျော်ဖြေမှု (78မဂ္ဂါဝပ်) စီမံကိန်း
အဆိုပါစီမံကိန်းကိုဟောင်းဖောက်သည်တစ်ဦးကိုထောက်ခံအုကူံဝယ်ယူဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာလေစွမ်းအင်စီမံကိန်း. ...
ကမ္ဘာ့ဦးဆောင် fiber optic cable ကိုထုတ်လုပ်သူများထံမှ Browse ကိုထုတ်ကုန်